Home Wararka Gudaha Faah-faahin: Laba qarax iyo weerar caawa ka dhacay Koonfurta MUQDISHO
Wararka aan ka heyleyno degaanka KM-13 ee koonfurta magaalada Muqdisho ayaa sheegaya, in caawa uu ka dhacay qarax xoog leh, halkaas oo qaraxa kadib la isku weydaarsaday rasaas mudo socotay.
Dadka deegaanka ayaa Caasimada Online u sheegay in qaraxa kadib ay goobta ka bilaabatay rasaas mudo socotay, waxaana qaraxaas oo ahaa miino lala beegsaday gaadiid ciidan.
Inta la xaqiijiyey hal qof ayaa ku geeriyooday qaraxaas, si rasmi ahna looma xaqiiji karo khasaaraha jira, maadaama ay tahay xilli habeen ah, waxaana caawa xaalad cabsi ah laga dareemayaa wadada xariirisa Muqdisho iyo degaanka Ceelasha Biyaha.
Dhinaca kale qarax miino ayaa isla caawa ka dhacay maqaayad Shaah lagu iibiyo oo ku taalla agagaarka kaamka Badbaado ee degmada Dharkenley, waxaana halkaas ku dhaawacmay shan qof oo u badan askar ka tirsan militeriga Soomaaliya.
Qaraxaas oo ahaa miino ayaa lagu aasay maqaayada, sida ay noo sheegeen dadka deegaanka, wuxuuna bartilmaameedkiisu ahaa ciidanka oo imaa jiray maqaayadda, waxayna xogta hordhaca ah sheegeysaa in la xaqiijiyey dhaawacyada shan qof.
Previous articleSidee u aragtaa in Axmed Madoobe uu yahay Kansar Siyaasadeed ku jira Somaliya ?
Next articleFarmaajo waxa Mooda in wali Madaxweynaha Dalka oo ka yahay Balse caawa soo saaray farriin cusub!
Madaxweyne Xasan oo kulan muhiim ah la yeeshay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee...
Madaxweyne Deni oo Maanta furaya Kal-fadhiga 50aad ee Baarlamaanka Puntland
Munaasabadda xuska maalinta Deegaanka Adduunka ayaa lagu maamuusaya magaalada Jigjiga.